Dayisa Imikhiqizo Ephezulu. Qala Ibhizinisi. Shintsha Ukuphila.
I-Botle Buhle Brands iyinkampani ethenjwayo edayisa ngqo. Sinika imikhiqizo ekhethekile, ephezulu, nengabizi emphakathini wethu owandayo wamakhasimende.
Sinemikhiqizo edlula u-2000 kumabrendi athenjwayo:
Lapho ujoyina futhi ulandele ibhizinisi lethu elikhulayo ungashintsha impilo yakho ibe ngcono.
Sithobela isigaba sikahulumeni waseNingizimu Afrika sokusabela ku-COVID-19 (Level 1), siyakwazi ukuletha kwakho imikhiqizo ekwikhathalogi. Sifuna ukukusiza ngokusemandleni ethu ngezisebenzi zethu ezincishisiwe ezisebenzela emakhaya. Uma umibuzo nezikhalazo xhumana nathi ngekhasi lokuxhumana nathi kuwebusayithi yethu.
Ukuze uthole okwengeziwe ngokusabela kukahulumeni waseNingizimu Afrika ku-COVID-19, sicela uchofoze ngezansi:
Usizo ngeWhatsapp Webhu yeCOVID-19
Dayisa Imikhiqizo Esezingeni Eliphezulu. Qala Ibhizinisi. Shintsha Ukuphila.
Ukuqala ibhizinisi lakho kungathusa, kukungabazise futhi ube nemibuzo. I-Botle Buhle Brands izokuhola endleni eqinisekisiwe yempumelelo ukuze uphumelele.
ngakhulisa indlu yami, ngathenga imoto yami yokuqala ngaphandle kwesikweletu, ngathenga iloli engihambisa ngalo izinto engizidayisayo ngabe sengithenga imoto yami yesibili. I-Botle Buhle Brands ingenze ngaphinde ngazethemba.
U-Cynthia Mashigo | Umsabalalisi
sikhokhela abasebenzi abane, silungise indlu kamama, sathenga umhlaba ekhaya, sashintsha indlu yethu ye-RDP yaba yindawo yokugcina izinto sathenga izimoto ezimbili.
UNomvuyo no-Sammy Manca | Umsabalalisi
sikhokhela isikweletu semoto nyanga zonke, sikhokhe nemali yesikole sezingane. Siqasha indawo yokugcina izinto sathenga ne-trailer.
UNokwanda noSiseko Masimini | Umsabalalisi
ngiqedele indlu yami enhle, ngathenga izimoto ezintsha eminyakeni emithathu elandelanayo. Ngizinzile ngokwezimali.
UThandiwe Malamule | Umsabalalisi
sithenge izimoto ezintathu, saqasha abantu abahlanu basemphakathini futhi simatasa sakha indawo yethu yokugcina izinto
U-Violet no-Fister Rikhotso | Umsabalalisi
ngifake odadewethu ababili eyunivesithi futhi manje bayasebenza. Ngifake ucingo lokuvikela kanye nesango likagesi endlini yami. Ngiqashe ihhovisi edolobheni futhi ngizinzile ngokwezimali.
UZanele Sacolo | Umsabalalisi
sithenge i-Ford Ranger, iloli encane, sathengela nendodakazi yethu imoto entsha. Sisebenzisa indlu yethu endala njengendawo yokugcina izinto nanjengehhovisi, sathenga indlu edolobheni endaweni evikelekile. Silungisa indlu kamama.
U-Onica & noLeonard Nkuna | Umsabalalisi
Njalo ngenyanga, sikhipha ikhathalogi entsha equkethe emisha nokwakamuva imikhiqizo.
Thuthukisa Abantu, Khulisa Ibhizinisi
Eminyakeni engu-22 edlule, i-Botle Buhle Brands iye yasiza izinkulungwane zabantu manje ezikhululekile futhi ezinamabhizinisi azo. Nakhu ezikushoyo:
I-COVID-19 ibiyinselele futhi iqhubeka iyinselele ngenxa yokuthi iyinto entsha kithi. Njengomnikazi webhizinisi, benginomthwalo wokuqinisekisa ukuthi bonke labo ababheke kimi abasali dengwane noma belambile, futhi kulaba ngibala nalabo abangewona umndeni wami. Ngaphambi kokuba uMongameli amemezele ukuvalwa kwezwe ngonyaka odlule, ngabhukhela mina Nabaphathi bami ehhotela ukuze sethamele ingqungquthela eyayizobanjwa ubusuku bonke. Ingqungquthela yayihloselwe ukuthola izindlela ezintsha zokuthuthukisa ibhizinisi lethu. Lowo mhlangano wasisiza ngoba konke esaxoxa ngakho yilokho okusisize sakwazi ukubhekana nezinselele ze-COVID-19 ngaphambi kokuba sazi nge-COVID-19".
Sikwazile ukuthengisa izinto eziningi futhi saqhubeka sifaka abantu enkampanini yethu. Kungakhathaliseki ukuthi i-COVID ikhona noma ayikho, kudingeka sigcine ibhizinisi lethu liqhubeka lisebenza. Zivikele ngokufaka isifonyo, usebenzise okokubulala amagciwane futhi uqhele ebantwini. Kungakhathaliseki ukuthi wenzani, ungayeki.
Ukuba nombono omuhle phakathi nobhubhane kungisize nganakekela ibhizinisi lami ngokuphumelelayo, ngize ngakwazi nokuzithengela i-BMW M4 entsha. Lokhu akubangelwa ukuthi ngingcono kunawo wonke umuntu, kubangelwa ukuthi ngibona ukubaluleka kwalo lonke ilungu lethimba lami.
Sengibe kuleli bhizinisi isikhathi eside kakhulu futhi njengasemabhizinisini amaningi ngiye ngabhekana nezinselele, kodwa ngikwazile ukubhukula bese ngiphinde ngiyazama. Yilokho okubangela ukuba ibhizinisi lami liphumelele.
Nge-BBB, kuyangijabulisa ukusiza umphakathi wami. Ngiye ngakwazi ukunikeza abesifazane abebengakwazi ukufunda nokubhala ithuba lokuba baziphilise. Ngiye ngakwazi ukusiza izingane eziswele ukuba zithole imfundo, futhi ngiye nganika amadoda amaningana angasebenzi kodwa azimisele, ithuba lokusebenza e-BBB ukuze akwazi ukunakekela imindeni yawo. Nakuba singena ebhizinisini ukuze sizuze futhi sizinze ngokwezimali, ayikho into eyanelisa njengokukwazi ukusiza abantu abaswele.
Njengosomabhizinisi, ungumholi futhi kubalulekile ukuba uholele abantu endleleni efanele. I-COVID-19 yenze ukuqhuba ibhizinisi lethu kwaba yinselele ngoba besingakwazi ukuba nemihlangano noma ukuqeqeshwa. Ngokujabulisayo, ngenxa yokusebenza kwethu ngokuzikhandla ebhizinisini nangenxa yomusa kaNkulunkulu, ngiye ngakwazi ukwakhela umndeni wami ikhaya ngaphinde ngakha nezindawo ezimbili zokugcina izinto ze-Puer ne-BBH.
Abasabalalisi banjengabazali, kudingeka sihlinzekesiphinde sinakekele labo ababheke kithi. Ngikholelwa ekwenzeni izinto ngendlela ye-BBB.
Ngiyakwazi ukubaluleka kokudlulisela ithuba kubantu abangakezwa lutho ngaleli bhizinisi futhi ngilibheka njengelibalulekile. Ngiyakuqonda nokubaluleka kokukhuthaza labo abasebhizinisini kodwa abangaqhubi kahle, noma labo abacabanga ukuyeka ngenxa yezinselele ababhekene nazo.
Ukuba kuleli bhizinisi kudinga ukuba ube nesineke ngoba ukusebenzelana nabantu akulula, sonke sihlukile ngakho ngeke sivumelane ngaso sonke isikhathi noma sibheke izinto ngendlela efanayo. Ngiye ngakhuphula Abaphathi Nabasabalalisi abaningana kusukela ngilapha e-BBB. Yiba nesineke kuwe nasebhizinisini lakho, kuthande lokho okwenzayo, futhi ibhizinisi lakho lizokhula.
U-Cairo nomkakhe uNkhensani Mongwe bakha iqembu eliqinile. Bahlala eTzaneen, eSifundazweni saseLimpopo futhi bebelokhu besebhizinisini le-Botle Buhle Brands kusukela ngo-2006.
"Ngesikhathi umkami ejoyina ibhizinisi sasisebenza sobabili. Ngangisebenza enkampanini yezezimali futhi yena enakekela ihhovisi enkampanini ayekuyo. Sasinendlu ye-RDP kanye nezindlu ezintathu zotshani. Sasisebenza sobabili kodwa sithwele kanzima ngokwezimali," kusho u-Cairo.
Ngokuzikhandla nangokusekelwa umyeni wakhe, uNkhensani wakhuphuka waba umphathi ngo-2011. Kamuva u-Cairo, owayelijoyinile ibhizinisi ngisho noma ekuqaleni ayethi "yibhizinisi lomama," naye wakhuphuka waba umphathi.
UCairo uthi "imfihlo yokuphumelela ukusebenzisa ithuba i-Botle Buhle Brands ekunika lona ngokugcwele." Uyenezela, "Sazibambela mathupha ibhizinisi lethu. Ngokufaka abantu abengeziwe nangokudayisa sakhula sisuka kubaphathi abane saya kwabangu-28 futhi sesizokhuphula umsabalalisi omusha."
I-Botle Buhle Brands ibanike ithuba lokuletha ushintsho emphakathini ngokuvula amathuba emisebenzi nangokushintsha ukuphila kwabantu. Namuhla banethimba labantu abangaphezu kwenkulungwane.
"Silwa nobubha phakathi kwabantu bakithi futhi sishintsha nokuphila kwethu. Namuhla sinendlu enamagumbi ayishumi kanye nohide lwezimoto zebhizinisi nezethu. Nge-Botle Buhle Brands noma ubani angashintsha ukuphila kwakhe kube ngcono," kusho abakwaMongwe.
Ngaphambi kokuba ngijoyine i-BBB eminyakeni engu-15 edlule, ngangisebenza emayini. Iholo lami lalihluleka ukunakekela umndeni wami, ngaphezu kwalokho ngabe sengidilizwa emsebenzini. Ukungakwazi ukunakekela umndeni wakho, kungakwenza ulahlekelwe yisithunzi sakho, inhlonipho nedumela. Inkosikazi yami eyashona kanye nezingane zami babengihlonipha ngisho noma ngangibhekene nakho konke lokhu, kodwa ukwehluleka ukubanakekela kwangenza ngazizwa ngingenamandla.
Ngosizo lwe-BBB, manje nginebhizinisi lami, nginakekela umndeni wami futhi ngingumholi emphakathini.
Nge-BBB, manje ngishayela i-Toyota Hilux yamuva kanye ne-Mercedes Benz. Ngiye ngaqasha nabantu abadinga umsebenzi futhi ngafaka nabanye abebedinga amathuba ebhizinisi. I-BBB yenze ukuphila kwaba kwaba ngcono futhi ukujoyina ibhizinisi kube yisibusiso ekuphileni kwami.
U-Miranda Mechedi wajoyina i-Butle Buhle Brands ngo-2008 lapho eqhubeka nebhizinisi ayelithatha kunina owayeseshonile. "Ngagqugquzelwa ukubona imali umama ayeyenza e-BBB nangenxa yokuthi ngiyazithanda izinto ezinhle ngakho nganquma ukujoyina. Ngaphambi kokujoyina i-BBB ngangiphila kodwa hhayi ngendlela engangiyifuna. Ngangifuna okwengeziwe, ngangifuna impilo enhle," esho.
"Ngesikhathi umama eshona ngenziwa umphathi ngabe sengizimisela ukuba ngiphumelele kuleli bhizinisi. Angikwesabi ukusebenza kanzima, ngakho yilokho engakwenza, ngazikhandla. Ngosizo loMsabalalisi wami kanye nabanye abaphathi ngafunda okuningi ngebhizinisi. Ngabuza kwabanye abaphathi abaphumelele ukuthi benza kanjani futhi angizange ngidlale ngethuba. Ungadlali ngethuba, lisebenzise. Ungahlali enhluphekweni usonge izandla. Sebenzisa ithuba le-BBB ukuze uzenzele okuthile ekuphileni kwakho. Yeka ukukhononda, 'vuka usebenze.' Kusebenzele kanzima lokho okufunayo, unalo ikhono. Zikhandle kokwenzayo nokufisayo ngoba ngeke ukuthole ngokufisa kuphela, ukuthola kuphela ngokusebenza. Thatha isinyathelo manje ngoba kusasa kungabe sekwephuzile," kuxwayisa uMiranda.
Akumelwe uvilaphe endleleni eya engcebweni
U-Onicca noLeonard Nkuna
U-Onicca Nkuna uthi wajoyina izinkampani eziningi ezidayisa ngokuqondile esikhathini esidlule kodwa ayikho kuzo eyamsiza. Ngisho noma ayenza kahle, ebhekwa njengomdayisi ophambili, imali ebhange yayingangeni.
Nge-Botle Buhle Brands ukuphila kungcono kakhulu. "Siyakwazi ukuthenga izinto esizifisayo, kodwa akumelwe uhlale phansi ulindele isibusiso, kudingeka usebenze ukuze ubusiswe," kukhuthaza u-Onicca.
Uthi uhlale etshela abadayisi ukuthi uma ulala esikhundleni sokusebenza isitatimende sasebhange naso sizolala - akukho simangaliso esizokwenzeka - kudingeka usebenzise ithuba.
"I-Botle Buhle Brands yafika ekuphileni kwami ngesikhathi ngidikibele futhi ngingenamali. Ngangingumsabalalisi kwenye inkampani edayisa ngokuqondile kodwa izimo zazingalungi. Ngangihluleka ukondla umama nendodakazi yami. Ngangikhandlekile ngokomzwelo. Kwase kuphele izinyanga ezingu-8 ngingasebenzi ngaphambi kokuba nginqume ukujoyina i-Botle Buhle.
Namuhla ngiyakwazi ukondla indodakazi yami nomama futhi nginemali yokuphila ntofontofo. Ngithole idiploma yami yesibili, ngaqedela ukwakha indlu yami futhi sahlukaniselana nomama, ngabe sengithenga imoto entsha. Ngiyaziqhenya ngokuba umphathi e-Botle Buhle Brands!"
Izinselele ziholela empumelelweni
U-Olga unguthisha oqeqeshiwe kodwa iholo lakhe lalinganele ukunakekela umndeni wakhe. Wayejwayele ukuvuka ngo-4 ekuseni abhake amakhekhe ayewadayisela izingane esikoleni, ukuze enze ngcono ukuphila kwakhe. Uthi, "Ngase ngizame izinkampani eziningi ezidayisa ngokuqondile kodwa zonke zazehluleka, lwalungekho ushintsho".
Ushintsho ngalubona lapho ngijoyina i-Botle Buhle Brands ngo-2014. Uyachaza, "Ngasebenza kanzima ngemva kokujoyina i-Botle Buhle Brands. Ngahlala phansi ngahlela indlela yokwakha ibhizinisi eliphumelelayo, kodwa kwakusekhona izinselele eziningi. Lapho uqala ibhizinisi elisha izinselele zilindelekile kodwa ngenxa yokuthi ngangizilungiselele ukubhekana naleli bhizinisi, ngokulalela nokufunda okushiwo abadayisi nabasabalalisi, ngaba namandla okubhekana nazo zonke."
Namuhla, nge-Botle Buhle Brands, ukwazi ukwenza okuningi kakhulu kunalokho abengakwenza ngeholo lokuba uthisha kuphela. Unokwanele kokunakekela umndeni wakhe futhi uphinde asize nomphakathi wakhe. Wakhe isonto futhi usezinhlelweni zokwakha elinye. Iseluleko sika-Olga, ukusukuma uthathe isinyathelo sokuqala, ushintshe ukuphila kwakho kube ngcono.
Qala impumelelo namuhla
Bhalisa uthole imeyili njalo
ukuze uthole izindaba zethu zakamuva.